Home News Muxuu yahay Ajandaha Maanta ee Fadhiga Golaha Shacabka Soomaalia?
Muxuu yahay Ajandaha Maanta ee Fadhiga Golaha Shacabka Soomaalia?
Xildhibaanada Golaha Shacabka Soomaalia ayaa waxa ay Maanta oo Sabti ah kulankoodii caadiga ahaa kuyeelan doonaan Xaruntooda ay ku shiraan oo ku taala Magaalada Muqdisho.
Ajandaha kulanka Maanta ayaa waxa uu yahay
1. U codeynta Heshiiska Damaanad Qaadka Maalgashiga Darafyada badan.
2. Akhrinta 3aad ee wax ka badelka Sharciga Duulista Rayidka ee Hawada.
Xildhibaanada Golaha Shacabka Soomaalia ayaa waxa ay Maalmihii lasoo dhaafay ka doodayeen Sharciga Duulimaadyada reyadka ah waxaan Xalay Xildhibaanada loo diray Warqad ah in uu Beri jiro kulanka Xildhibaanda ayna soo xaadiraan.